Ambohitrarahaba : Basy « revolver » namidy 600 000 Ar -
AccueilSongandinaAmbohitrarahaba : Basy « revolver » namidy 600 000 Ar
Ambohitrarahaba : Basy « revolver » namidy 600 000 Ar
30/11/2017 admintriatra Songandina 0
Tsy afa-bela teo anatrehan’ny vela-pandrika nataon’ny mpitandro filaminana ireo mpivarotra basy, teny Ambohitrarahaba. Efa tsy miafin’endrika intsony mantsy izy ireo, ka dia mora foana no nanjono azy. Sanatrian’izany toa ireny mivarotra “sprinter” ireny, ka misy mihitsy ireo mandeha mitady mpividy.
Ny 22 novambra teo no efa nanaovan’ny mpitandro filaminana ny fanarahan-dia azy ireo. Nilatsaka ho toa ny mpividy ny mpitandro filaminana, ary nanao fanamiana sivily. Tany anaty trano fisotroana no fotoana. Teo no nivoaka ny nafenina satria dia hita teo fa basy “revolver” ity saika hamidy ity, ka mitentina 600 000 Ariary no hivarotana azy.
Tsy nisy bala ilay izy fa anjaran’izay mpividy no mitady bala ho an’ilay basy. Mandeha ny famotorana mikasika ireto mpivarotra basy ireto, satria isan’ny fanontaniana goavana momba izao trafikana fitaovam-piadiana izao dia hoe “sao dia efa nahalafo basy maromaro noho izao izy ireo”. Loza goavana sy manome vahana ny tsy fandriam-pahalemana mantsy ny fiparitahan’ny basy tahaka itony.